रक्सी संस्कृति - China Radio International
(GMT+08:00) 2017-10-25 08:33:35
हुन त चीनमा पानीभन्दा बियर सस्तो मानिन्छ। सुपरमार्केटहरुमा पानी र क्यान बियरको मूल्य उस्तै उस्तै पर्छ। कुनैकुनै रेस्टुराँमा एक मुष्ठ पैसा तिरेर पसेपछि बियर जति पनि खान पाइन्छ तर पानीचाहिँ किन्नुपर्छ।
चीनमा बढिरहेको रक्सी संस्कृति र आडम्बरी खर्च कटौती गर्नका लागि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकले विशेष प्रस्तावै पारित गरी भोजभतेरमा रक्सी प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। यद्यपि चीनमा आयोजना हुने स्वागत तथा बिदाइका भोजभतेर तथा अन्य उत्सवहरु रक्सीमय हुने गर्छन्।
रक्सी संस्कृति चीनको तिब्बती जातिमा पनि उत्तिकै व्याप्त छ। चीनको पश्चिममा पर्ने कान्सु प्रान्तको काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा जाँदा रक्सीको महिमालाई घनिभूत रुपमै अनुभव गर्न पाइयो। काननानमा पाहुनालाई स्वागत गर्न जौबाट बनेको स्थानीय रक्सी खुवाइँदो रहेछ। डिनरमा पनि रक्सी नखाइ नहुने। कलाकारहरु आएर गीत गाउँदै तिन ट्वाक रक्सी खुवाउँछन्। 'खान्न' भन्दा माने त के। म थिएँ १९ जनाको समूहको एक्लो विदेशी। बेइजिङबाट गएका केटीहरु ती कलाकारलाई के भन्थे कुन्नि, मेरो वरिपरी झुम्मिएर गीत गाउन थालेपछि रक्सी नखाउन्जेल डेग नचल्ने। हुन त सिह्न्वामा कार्यरत चिनियाँ युवतीले मलाई पहिलो दिनमै एउटा जुक्ति सिकाएकी थिइन् 'यहाँको चलन अनुसार उनीहरुले दिएको रक्सी खानैपर्छ, त्यो सगुन हो। खान्न भन्नु उनीहरुको अपमान हो। त्यस कारण खाएजस्तो गरेर अलिअलि जुठो हाल्नैपर्छ।' मैले पनि त्यही जुक्ति निकालेँ। जुठो हाल्ने काम पनि एक पटक मात्र हो र, तिनतिन पटक। म हरेक बटुको उचालेर ओठमा पुर्‍याएर यसो खाएजस्तो गर्थ्येँ।
प्राय: खाना खाने बेलामा हामी घुम्ने टेबल ओरिपरि बस्थ्यौँ। लन्च होस् कि डिनर, दौडेर आइहाल्थे तिब्बती कलाकारहरु रक्सीको भाँडो र थालीमा भरेका तिनवटा रक्सीका बोल लिएर। गीतको मीठो भाका र पोसाकको आकर्षणले रक्सी नखानेलाई पनि उत्तिकै मनोरञ्जक माहोल बन्थ्यो। हरेक व्यक्तिलाई फरक फरक तिब्बती गीतबाट स्वागत गर्ने कलाकारहरु गएपछि वातावरण नै सुनसान हुन्थ्यो तर रक्सीबाट मुक्ति पाए पो ! खाना अन्तमा प्रान्तीय पार्टी कमिटी र सरकारका अधिकारी एवं प्रिफेक्चर पार्टी कमिटी र सरकारका अधिकारीहरु पालैपालो रक्सी लिएर आउँथे 'क्याम्पे' गर्न। चिनियाँहरु 'चियर्स' भन्दा बढी 'क्याम्पे' शब्द प्रयोग गर्छन्। क्याम्पे गर्दा एकै स्वाटमा आफूसँग भएको सबै रक्सी पिएर सक्नुपर्छ। दोभाषेको सहयोगमा म अनुरोध गर्थ्येँ 'मलाई डाक्टरले रक्सी नखान भनेको छ। मेरो कलेजोमा समस्या छ।' तर चिनियाँ अधिकारीले पत्याए पो 'हाम्रो मित्रताको प्रतीक हो, थोरै चियर्स गर्नैपर्छ !' उनीहरुको भावना बुझेर सहकर्मी ललिता मलाई सम्झाउँथिन् 'थोरै पिउनुहोस्। उहाँहरु स्थानीय नेता हो। नेताले भनेको मान्नुपर्छ।' अलिअलि गर्दागर्दै मात्ने स्थिति हुन्थ्यो।'चीन र नेपालको मित्रताको प्रतीक' भनेर रक्सीको गिलास उठाउँदा मैले केही वर्ष अगाडिको घटना सम्झिएँ। नेपालबाट पूर्वसञ्चार मन्त्रीहरु प्रदीप नेपाल, जेपी गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, नारायण वाग्लेहरुको एउटा समूह चीन भ्रमणमा आएको बेला बेइजिङमा केही समय हामी सँगसँगै घुमेका थियौँ। त्यति बेला पनि चिनियाँ रक्सी संस्कृतिको कुरा भएको थियो। जेपी गुप्ता भन्नुहुन्थ्यो 'चिनियाँ रक्सीको मान्यता अपरम्पार छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला चीन भ्रमणमा आउँदा चेयरम्यान माओत्सेतुङसँग रातभर रक्सी ठोक्काउँदै वार्ता गर्नुभएको थियो रे। बिहान उज्यालो हुने बेलामा मात्र चेयरम्यान माओले बीपीसँग अन्तिम गिलासको रक्सी ठोक्काउँदै तपारईंले हाम्रो आतिथ्य सत्कार स्वीकार गर्दै हामीसँग रातभर रक्सी पिउनुभयो। रक्सीको यो अन्तिम गिलासलाई दुई देशको मित्रताको प्रतीकका रुपमा उठाउँदै म घोषणा गर्छु कि सगरमाथाको चुचुरो नेपालको सीमाभित्र पर्छ।' त्यसपछि वार्ता टुङ्गिएछ।
माओ र बीपीबीच त्यस्तो छलफल भयो कि भएन, त्यो त पुष्टि हुने कुनै सामग्री नभेटिएला तर गुप्ताजीको भनाइले आतिथ्य सत्कारमा चिनियाँ रक्सी संस्कृतिलाई भने गतिलो ढङ्गले पुष्टि गरेको छ।
काननानमा स्थानीय नेताहरुले 'हाम्रो मित्रताको प्रतीक' भन्दै रक्सीको गिलास उठाउँदा म पनि निकै भावुक भएर रक्सी पिउन थालेँछु। सहकर्मी ललिता याद गरिरहेकी रहिछन्। कहिल्यै रक्सी नखाने मान्छेले नेतैपिच्छे घुट्क्याउन थालेको देखेपछि उनी बिस्तारै 'अलिअलि खाएजस्तो मात्र गर्नुहोस्' भन्दै थिइन्। उनले नेपालीमा बोलेको बुझ्ने मबाहेक अर्को मान्छे नहुँदा एक किसिमको सजिलो पनि थियो। पछि त उनी आफैँ नेताहरुलाई चिनियाँ भाषामा सम्झााउन थालिन् 'यो विदेशी कहिल्यै रक्सी खाँदैन। यहाँ तपाईंहरुको आतिथ्य स्वीकारमा मात्र खाँदैछ। त्यस कारण उसलाई पिउन कर नगर्नुहोला।' ललिताको भनाइले मलाई निकै सुखी लाग्यो कमसेकम उनले मेरो भावना राम्ररी बुझेकी थिइन्।
ललिता आफू रक्सी मन नपराउने मान्छे, उनको पनि हालत उही थियो। आयोजकहरुको आतिथ्य सत्कार त उनले पनि स्वीकार गर्नै पर्दथ्यो। नेपालमा जस्तो भए महिलालाई रक्सी खान कर गरिन्नथ्यो होला। चीनमा महिला र पुरूषमा खासै भेदभाव हुँदैन। ललितालाई रक्सी झेल्न निकै हम्मे परिरहेको थियो।
एक हप्ता काननान बसाइको अन्तिम डिनर अगिल्लाभन्दा निकै भव्य थियो। डिनर भव्य भएपछि रक्सी पनि भव्य तरिकाले नै पिउनुपर्ने अवस्था आयो। सोचेँ, अब फिटान बनाएर मताउने भए चिनियाँहरुले। बिदाइ डिनर पनि भएकाले अरु बेलाभन्दा धेरै सहभागी थिए स्थानीय नेताहरु। सबैसँग गिलास ठोक्काउँदै रक्सी खाँदा त एकैछिनमा ढलिहालिन्छ म भित्रभित्रै पिल्सिन थालें। सिटप्लान अनुसार डिनरमा मेरो छेउमै थिइन् ललिता। सधैँझैँ तिब्बती कलाकारहरु परम्परागत पोसाकमा सजिएर बाजागाजा बजाउँदै अत्यन्त सुमधुर गीत गाउँदै आए। ललिताजीले मैले रक्सी नखाने कुरा सुनाएपछि उनीहरुले अचम्मको सर्त राखेछन् 'रक्सी नखाने भए एउटा नेपाली गीत गाउनुपर्छ !' मलाई रक्सी खानुभन्दा गीत गाउन सजिलो थियो। त्यसैले ललिताजीलाई सघाउन अनुरोध गर्दै मज्जाले गाइदिएँ 'रेशम फिरिरी'। एउटै मात्र विदेशी, त्यसमाथि मेरो गायन; खै कस्तो सुनियो कुन्नि ! तर अर्को पनि गीत गाउने फर्माइस् आएपछि 'इलामै सहर चियाबारी राम्रो' बोलको गीत गाएँ र त्यसको थोरै भावार्थ पनि बताएँ। ललिताजीले चिनियाँमा अनुवाद गरेर सुनाइन्। कलाकारहरु पनि दङ्ग परे।
रक्सी पिउनुपर्ने एउटा खड्गो पार भयो। कलाकारहरु बिदा भए तर स्थानीय नेताहरुसँग गिलास ठोकाउन त बाँकी नै थियो। हामी डिनर खान थाल्यौँ। डिनरको बीचबीचमा गिलास लिएर स्थानीय नेताहरु आउँछन् भन्ने कुरामा म जानकार थिएँ। केही बेरपछि रक्सी लिएर नेताहरु आउन थालिहाले। अरु बेला रक्सी पिउन पटक्कै मन नगर्ने ललिताजी चिनियाँ नेताहरुसँग रक्सीको ट्वाक ठोकाउँदै गफ गरेको देखेर म छक्क परेँ। उनले आफूसँग रक्सीको ठूलो भाँडो पनि राखेकी रहिछन्। रक्सी पिउँदै आएका नेताहरुसँग रक्सी थप्ने तिब्बती महिलाहरु पनि साथमै आएका थिए। ललिता उनीहरुबाट रक्सी नथपेर आफैँले राखेको रक्सी थप्तै पिउँदै थिइन्। उनी नेतासँग गिलास ठोक्काएर स्वाट्ट रक्सी पिउँथिन् र अनुहार बटारेर रक्सीमा भएको कडापनको प्रतिक्रिया दिन्थिन्। 'अगिल्लो दिनसम्म यिनले रक्सी पिउँदिनँ भनेको त नाटक मात्र रहेछ' मनमनै सोच्तै थिएँ। तैपनि ममा कुतूहल थपिँदै थियो। बेलाबेला ललिता मेरो अनुहारमा हेरेर सुसुक्क हाँस्थिन्। उनी उभिएर नेताहरुसँग गफ गर्दै थिइन्। खै के सुर चलेर हो, मलाई उनको टेबलमा राखेको रक्सी सुँघ्न मन लाग्यो। अरुका आँखा छलेर सुघें पनि। अझै चित्त नबुझेर आफूलाई रक्सी खान दिएको गिलासमा अलिकति हालेर चाखें। ओहो कहाँको रक्सी हुनु नि। पानी पो रहेछ। अनि त म पनि ललिताजीको आइडिया पछ्याउन थालिहालें।
एकैछिनमा नेताहरु मेरो नजिक आइपुगे। तिब्बती युवतीले मेरो गिलासमा रक्सी हाल्न आँटेकी थिइन्। मैले आफूसँगै रक्सी भएको जानकारी दिएर ललिताजीले ठिक्क पारेको पानी गिलासमा राखें। त्यसपछि त जति ठोक्काए पनि बाल मतलब भए पो। त्यो दिन दश बजेसम्म रक्सीमा पानी चियर्स गर्दै मजाले डिनर गरियो। ललिताजीलाई जिस्क्याएँ 'तपाईं त पानी पिएर पनि कति राम्ररी रक्सी पिएको अभिनय गर्नहुँदो रहेछ !' भनिन् 'म कलाकारभन्दा कहाँ कम छु र !' उनको अनुहारमा गौरवको हाँसो थियो।
(चीन चिहाउँदा पुस्तकको अंश)
साभारः कान्तिपुर दैनिक कोसेली। २०७४ भाद्र ३१ गते २०१७ सेप्टेम्बर १६ तारिख शनिबार।